दीपाश्री निरौलाले भन्छिन्- सामीप्यता बढ्ने डरले पूर्वप्रेमीलाई भेट्न चाहन्न ! - Nepal Post Daily
दीपाश्री निरौलाले भन्छिन्- सामीप्यता बढ्ने डरले पूर्वप्रेमीलाई भेट्न चाहन्न !
दीपाश्री निरौला लगातार सफल फिल्म दिने निर्देशकमा पर्छिन् । अभिनेत्री हुँदै निर्देशनमा लागेकी दीपाले ‘छक्का पञ्जा’ मार्फत निर्देशनमा पाइला टेकेकी हुन् । यसअघि उनी ‘६ एकान ६’ र ‘वडा नम्बर ६’ मा निर्माताका रूपमा थिइन् ।
डेब्यु फिल्ममै उनले सफलता पाइन् । त्यसपछि ‘छक्का पञ्जा २’ र ‘छक्का पञ्जा ३’ ले पनि सफलताको रेकर्ड बनाउँदै गए । नेपाली फिल्मको बजार तताउने श्रेय दीपासहित दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरेलगायतको टिमलाई जान्छ ।
०५४ मा पहिलोपटक फिल्ममा अभिनय गरेकी दीपालाई ‘गाउँले’ चलचित्रमा समावेश गीत ‘गोली सिसाको…’ ले दिलाएको हो । उक्त गीतमा राजेश हमालसँग नृत्य गरेकी दीपाले राम्रो चर्चा बटुलिन् । सो चलचित्र २०५५ तिर रिलिज भएको थियो ।
दीपाले यो सफलता सजिलै भने पाएकी हैनन् । विराटनगरको मध्यम परिवारकी सदस्य दीपाले काठमाडौंमा धेरै संघर्ष गरिन् । ०५० सालतिर उनको भेट दीपकसँग भएको हो । रेडियो नेपालमा कामका लागि पुगेकी दीपाले त्यहीँ प्रांगण दीपकलाई पहिलोपटक भेटेकी थिइन् । त्यसपछि यी दुईले सहकार्यको सुरुवात गरे । ‘दीपकलाई धनिया क्यारेक्टर चाहिएको रहेछ र म तराईको भएकाले उसले काम गर्न अफर गर्यो र हामीले सहकार्यको सुरुवात गर्यौं,’ दीपाले भनिन् । त्यही सहकार्यले तीतो–सत्य हुँदै ठूलो पर्दाको चलचित्रसम्म निरन्तरता पायो ।
तर, पनि चाडवाडमा दीपाले आफूलाई कहिलेकाहीँ एक्लो महसुस गर्छिन् । ‘चाडवाडमा सबै परिवारसँग हुन्छन्, म एक्लै हुन्छु त्यसैले आममान्छे झैँ मलाई पनि फिल हुनु स्वाभाविक नै हो,’ दीपाले भनिन् । तर, पछिल्लो समय उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ अगाडि बढाएकी छिन् । दर्शकको विश्वासले गर्दा उनी झन् बढी मेहनती भएकी छिन् ।
किन एक्लै छिन् त ? भन्छिन्, ‘सायद म करियरमा बढी फोकस भएँ । प्रेम पनि बसेको थियो, तर मैले त्यो समयमा करियरलाई नै रोजे । किनकि सानैदेखि मलाई अभिनय गर्छु भन्ने लागेको थियो ।’
उनको पहिलो प्रेम त बस्यो, तर करियर बाधक बन्यो । किनकि उनी फिल्मनगरीमा आफूलाई देख्न चाहन्थिन्, तर उनको प्रेमीको योजना अर्कै थियो । ‘मैले मलाई प्रयास गर्न देऊ भनेकी थिएँ । किनकि म आफ्नो सपनालाई एकपटक यथार्थमा परिणत भएको हेर्न चाहन्थे । तर, उसले मलाई १–२ वर्ष पनि कुर्न सकेन । उसको आफ्नै बाध्यता थियो, मेरो आफ्नै,’ दीपाले भनिन् ।
उनले प्रेमीसँग केही समय मागेकी थिइन्, तर प्रेमीसँग पारिवारिक दायित्व थियो । घरमा आमाबुबा विरामीलगायतका दायित्वका कारण त्यतिबेला जोडी सम्भव नभएको दीपाको भनाइ छ । तर, पनि पहिलो प्रेम अझै उनलाई याद छ । ‘हाम्रो सामाजिक सञ्जाल तथा फोनमा कुराकानी हुन्छ, तर भेटघाट हुँदैन,’ उनले भनिन् । भेटघाटले सामीप्यता बढाउने भएकाले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ ।
दीपाश्रीले विवाह नगर्ने मनसाय नबनाएकी हैनन्, तर अहिलेसम्म जुरेको छैन । ‘मेरो परिवारलाई पनि मेरो विवाह हेर्ने रहर छ, तर कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न,’ उनले भनिन् । उनले दायित्व नभएकै कारण आफूले सफलता प्राप्त गरेको पनि बताउँछिन् । उनी भन्छिन, ‘मैले एकाग्र भएर फिल्ममा काम गर्न पाएकी छु । अरु केही सोच्नुपरेको छैन, त्यसैले मेहनतको सफलता पाएकी छु ।’
जीवनसाथी नपाए पनि आफूले माया गर्ने साथी पाएको उनको भनाइ छ । जोसँगको सहकार्यले उनले आफ्नो सपनालाई मूर्तरुप दिन सफल भएकी छिन् । ‘हाम्रो बीचमा माया छ, तर त्यसमा मित्रता छ । हामीले यत्रो वर्ष सहकार्य गरेका छौँ, अनि सफलता पनि सँगै पाएका छौँ । माया नहुने सम्भव भएन, तर हाम्रो मित्रता निकै माथि छ,’ दीपाले भनिन् । यिनै दीपाले आज आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदैछिन् । आजदेखि उनी ४६ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् ।
Previous articleकांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन आज बुझाइँदै
Next articleजसपाले भन्यो- ओलीले सत्ता संकट टार्नका लागि हामीसँगको वार्तालाई अस्त्र बनाए [पूर्णपाठ]
अक्षय कुमारकी आमाकाे निधन
हृदयघातका कारण बलिउड अभिनेता शुक्लाको निधन